Mameno ny tanàna ny varo maizina | Zouboon
Mameno ny tanàna ny varo maizina
Filed under: Uncategorized — zouboon @ 7:31
Tao aorian’ny korontana be nahatsiravina izay nitranga teto Mahajanga izay nanomboka ny Atalata 27 Janoary 2009 lasa teo ary mbooa mitohy mangigina amin’izao fotoana izao, dia miparitaka eny anivon’ny fiarahamonina tsirairay eny ny varo maizina. Isaky fonkotany rehetra dia ahitana izay varo aémiziana izany daholo. Raha ny isan’ny tranom-barotra maro izay novakian’ireo mpanakorontana nanomboka ny androtr’io aloha no isaina dia tsy mahagaga mihitsy raha toy izany ny zava-mitranga eny anivon’ny fiarahamonina rehetra eny ankehitriny. Raha tsiahivina kely mantsy dia fantatra fa na an’olo-tsotra na an’ny fanjakana ilay toeram-pivarotana dia norobain’ny olona daholo. Na mpivarotra sakafo na mpivaro-damba, indrindra fa ireo toeram-pivarotana zavatra lafo vidy dia nataon’ny olona lasibatra daholo izany.
Noho izay antony izay indrindra, satria tsy nisahiranana fa nalaina fotsiny tsy nisahiranana ilay entam-barotra dia tsy maintsy atao an-tsokosoko daholo ny famarotana izany.
NY VARY NO TENA BE MPITADY
Satria efa mahalala ny tsirairay fa ho avy na fahasahiranana atsy ho atsy, dia samy manao izay ho afany daholo ny rehetra hanagona izay tsy rambin’ny tanany hitsijovana ny vody andro merika. Amin’ny mahan foto-tsakafo ny Malagasy ny vary, dia izay no iazakazahan’ny rehetra. Satria varotra antsokosoko no atao, dia amin’ny vidiny mora dia mora tokoa no amarotan’ireo nahazo izany teny amin’ny tranombarotra maro vaky. Tsy mahagaga izany satria zavatra tsy nisasarany akory izany- fa analaim-potsiny teny. Raha Ar 50 000 no tena tokony ho vidin’ny vary iray lasaka amin’ny andavan’andro dia Ar 10 000 fotsiny no amarotan’ireo olona izany indray. Ifabdromabahana mihitsy izany. Ny menaka sy ireo kojakoja maro samihafa ilaina ao an-tokatrano ihany koa dia tena iazakazahana.
Marihina fahetreto ireo olona rehetra izay nanontaniana dia mandà fa tsy mividy ireny halatra ireny daholo na dia samy mahafantatra aza izy samy iray tanànana eny hoe tsy marina izany. Asa aloha izay mety ho tena fiatraikan’iny korotana be teto amintsika iny, saingy ny efa inoana aloha dia tsy maintsy hisy mosary eto. Noho izany antony izany dia samy mila mamatotra ny fehikibony daholo ny rehetra
mandreraka be anie le izy de le olo marina tsy te hividy an’ireny no lasa mividy le entana amin’ny le lafo be. Matahotra ho marary Kibo amin’ny alahelon’olona
Commentaire par as2coeur — février 4, 2009 @ 6:19
Tena lasa mampiomehy marina ity toe draharaha ity
Commentaire par pakysse — février 5, 2009 @ 2:41